Tuesday 23rd November 2021 18:29:36 in Aragtida Dadweynaha by Xafiiska Hargeysa
Dabci uma laha aargoosi iyo uurxumo. Waxa uu muddadaas muujiyey odeynimo iyo isku haynta gole waynaha, waxaas'e layaab leh cidda canaan iyo cay uga dhigaysa bulsho abaal ku leh Cabdirisaaq sidee ayuu ugu mahadceliyey? Haddii aanad adigu ogaal u laheyn ciddi codka ku siiyey iyo xisbigaagii, Cabdirisaq waa yaqaannaa dadkiisa iyo ciddi dooratayba.
Golawaynaha ayaa laga tilmaami kara lagana toosin kara haddii khalad u galo guddoomiyihu, laakiin in saxaafadda laga canaanto waxa aan waxba aheyna cay looga dhiga waxa ka dhalanaysa anshaxmarin. Xeerka goolaha iyo xurmada xildhibaannino waa in aynu dhowrnaa.
Doontii Titanic Waxa Ay Ahayd Doontii 2-aad Ee Ugu Magaca Dheerayd Kadib Doontii Nabi Nuux Calayhi Salaam
[ XASAASI ]- Guddiga Doorashooyinka Somaliya Oo Hanjabad Adag Soo Saarey+Baadhitaan Lagu Samaynayo Xildhibaanadii La Doo